နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာရုံးမှ အာရှရေးရာနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ Minister of State ၊ The Rt. Hon Mark Field MP အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာရုံးမှ အာရှရေးရာနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ Minister of State ၊ The Rt. Hon Mark Field MP အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 28, 2017 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာရုံးမှ အာရှရေးရာနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ Minister of State ၊ The Rt. Hon Mark Field MP အား ယနေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ဗြိတိန် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် မြှင့်တင်ရေးကိစ္စနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်နေ သည့် ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးကြသည်။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဗွိတိနျနိုငျငံ နိုငျငံခွားရေးနှငျ့ ဓနသဟာယရေးရာရုံးမှ အာရှရေးရာနှငျ့ ပစိဖိတျဒသေဆိုငျရာ Minister of State ၊ The Rt. Hon Mark Field MP အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ဗွိတိနျနိုငျငံ နိုငျငံခွားရေးနှငျ့ ဓနသဟာယရေးရာရုံးမှ အာရှရေးရာနှငျ့ ပစိဖိတျဒသေဆိုငျရာ Minister of State ၊ The Rt. Hon Mark Field MP အား ယနေ့ နံနကျ ၁ဝ နာရီ ၁၅ မိနဈတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-ဗွိတိနျ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကိစ်စ၊ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေး ကိစ်စ၊ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရေးနှငျ့ မွှငျ့တငျရေးကိစ်စနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး အတှကျ ဆောငျရှကျနသေညျ့ ကိစ်စမြားကို ဆှေးနှေးကွသညျ။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲနှင့်ဇနီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ